Etu esi emepụta ezigbo ndị Enyi na Instagram | Gam akporosis
Akụkọ aghọọla nhọrọ a ma ama na Instagram, nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eji, na ngwa ahuru ka ohere. Agbanyeghị na ọ ga - ekwe omume na mgbe ị bulitere akụkọ na profaịlụ gị, ị chọghị ka mmadụ niile hụ ya. Maka nke a, netwọkụ mmekọrịta webatara ọrụ kacha mma ndị enyi depụtara ọnwa ole na ole gara aga. Họrọ onye ịchọrọ igosi akụkọ gị.
Ya mere, ọ bụ ezigbo ụzọ iji chịkwaa onye na-ahụ akụkọ gị. Anyị na-egosi gị n'okpuru ka esi agbakwunye ndị mmadụ na nke a ezi ndị enyi na instagram. Ọ bụ usoro dị mfe ma ị nwere ike gbanwee ndepụta a mgbe ọ bụla ịchọrọ na akaụntụ gị.
Anyị nwere ụzọ abụọ, ọ bụ ezie na nke kachasị mfe tinye profaịlụ anyị na Instagram. N'ime ya anyị pịa akara atọ dị larịị n'elu ihuenyo ahụ, n'aka nri. Nchịkọta ga-apụta n'akụkụ aka nri, ebe anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ.
Otu n’ime nhọrọ ndị a bụ Ezigbo Enyi. Pịa ya ma ndepụta ndị anyị na-eso na netwọk mmekọrịta ga-apụta. Naanị anyị ga-ahọrọ ndị anyị chọrọ igosi akụkọ anyị, na ịpị bọtịnụ mgbakwunye.
N'ụzọ dị otú a, mgbe anyị buliri akụkọ na Instagram, Ndị a nọ na ndepụta ahụ bụ ndị ga-enwe ike ịhụ ya n'oge niile. Onye anyị etinyeghị na ndepụta a agaghị enwe ike ịbanye na ha. Na mgbakwunye, ndepụta ndị a na-agbanwe mgbe niile, ọ bụrụ na anyị chọrọ iwepụ ma ọ bụ tinye mmadụ.
Yabụ, ọ bụrụ na oge ụfọdụ ịchọrọ ịtinyekwu ndị mmadụ, ị ga-emeghachi usoro ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ mmadụ na ndepụta a nke ezigbo ndị enyi na Instagram, tinye ndepụta wee pịa ihichapụ. Nke a dị mfe iji nweta ma n'ụzọ dị otu a anyị nwere ndepụta na - agbanwezi mgbe niile na ihe anyị chọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Otu esi emepụta ezigbo ndị enyi gị na Instagram
Girlsmụ nwanyị Powerpuff batara na gam akporo na Powerpuff Girls: Monkey Mania na Jetpack Joyride
Egwuregwu Tencent na-ewetara gị Knights nke Zodiac iji weghachi usoro egwuregwu ahụ na ọgụ na ọgụ